'Ilifa lemveli' ligqibelele, liyingozi, kwaye liXhalabile
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo [Uphengululo lwe-SXSW] 'Ilifa lemveli' ligqibelele, liyingozi, liXhalabisa elenza ifilimu
[Uphengululo lwe-SXSW] 'Ilifa lemveli' ligqibelele, liyingozi, liXhalabisa elenza ifilimu
by UTrey Hilburn III Matshi 15, 2018
ibhalwe ngu UTrey Hilburn III Matshi 15, 2018
Ukususela kwesibini Hereditary iqala, uyazi ukuba ulungele into eyahlukileyo. Ukusondeza kancinci kwindlu enodoli efana nokuphila itshintshela kwindlu yokwenene iyazi kakuhle, utsalelwa kwinto engakhuselekanga. Yimbonakalo ebonakalayo emalunga nokukutsalela elwandle olungenaluvelwano, nolumnyama.
Ibali lilandela usapho lakwaGraham, olujongana nelahleko yakutshanje yentsapho yosapho. Kungekudala emva komngcwabo, usapho luqala ukufumanisa ukuba iingcambu zokhokho babo zinokuba namaqhina awoyikisayo.
Hereditary Uhlaselo olucwangcisiweyo kubaphulaphuli. Ikhaya losapho lakwaGraham yinyani yonyani, ihlala iziva ikwinto eneempahla ezithile ezinobude obukrwada okanye ubungakanani obudala iqhekeza elincinci lokungonwabi kolunye uhlobo lwehlabathi olusele lusebenza kwimbono yakho yengqondo. Uyilo lwesandi luhlala lubetha ngokubhayina oludlalwa phantse kuwo wonke umdlalo wokuqala wefilimu. Ezi zinto zimbini zidibeneyo sele zikuncomela, ngaphambi kokuba kungeniswe izinto ezoyikisayo.
Eyona nto ibetha ingqondo yam yile yokuba ngumlawuli, into yokuqala ka-Ari Aster. Lo mfo kufuneka ukuba wayehlala ubomi obuninzi njengomlawuli ngaphambili, wayezimisele ekwenzeni ifilimu. Hereditary Ixhala eliyingozi elibangela ukwenziwa kwefilimu, i-Aster idala indlela entsha, ekrwada kunye neyoyikisayo yohlobo oloyikisayo.
Ifilimu inokubakho ngokupheleleyo njengedrama yosapho kwaye ngeyayifunxa. UAster uyakhathalela ukwenza ukuba izinto zomdlalo weqonga zisebenze, ngelixa esenza kancinci uloyiko. Okuninzi njengokubeka isele embizeni kunye neqondo lobushushu elinyuka kancinci, sele uphekwe ngesixa esikhulu sokubonisa umfanekiso neembono ezoyikisayo.
Ndingumntu othanda ii-A24 ezininzi ezoyikisayo. Iifilimu zohlobo lweatmospheric ezifana I-Witch Ngaba ikomityi yam yeti ethile. Hereditary ithatha izinto zasemoyeni yongeza amandla omxhuzulane kubo ngokunikezela kumboniso wento eyoyikisayo yabaphulaphuli (ewe, nkqu nokoyikisa kakhulu) ukwenza ifilimu evakalelwa ngathi ingavala umsantsa womoya otshisa kade kunye nabaphulaphuli aboyikisayo .
Imifanekiso eqingqiweyo kwifilimu ibambeke entlokweni yakho. Ndisacinga ngayo ngoku. Kukho imidlalo emininzi ebalisayo ekrelekrele ngokwenyani ngokwamava okukushiya unemifanekiso engathandekiyo kodwa nezinto onokufuna ukuya ekhaya kunye nophando.
Ubungako obufakiweyo bubungangamsha. UToni Collette kunye nelungu ngalinye losapho bakuthatha ngesandla phantsi kweendlela eziqhelekileyo, zosapho ngaphambi kokuba ushiye ulahlekelwe wedwa kwaye ngaphandle kwekhampasi kwingxelo yosapho emnyama. Intlungu kaCollette kunye nomlinganiswa omkhulu utyhila umsebenzi ngendlela eyoyikisayo kunye nomhlaba.
"Hereditary ixhala liyingozi ekwenzeni ifilimu, i-Aster idala indlela entsha, ekrwada neyoyikisayo yoluhlobo loyikekayo. ”
Hereditary kubaluleke kakhulu ukufezekisa ukoyikisa ngeendlela zonke. Yenza izinto ezithile ezingagungqiyo ngenkqubo yosizi kunye namandla eentsapho kwaye emva koko izitshintshe ngendlela ephantse yagqwetha. Yibhayisikobho enomoya okhohlakeleyo, injongo yayo kukukuphakamisa kwaye isebenze ngokupheleleyo kum. Ukusuka apho ndihleli khona, akukho ndlela yokuba le vidiyo ingapheli kuluhlu lwam oluphezulu lwe-5 ekupheleni konyaka. Le vidiyo iyingozi kwaye andinakulinda ukuba ndiphinde ndiyive.
Ukujonga kwakhona: Zak Bagans '' Iidemon House '
'Ranger' Itreyila yiPunk Rock Nightmare [SXSW]